Af soomaali - Somaliska | Kungsbacka kommun
Ku soo dhawaaw degmada Kungsbacka.
Waad ku mahadsan tahay inaad booqatay boggayaga. Degmadu waxay bixisaa adeegyada dhinacyada waxbarashada, daryeelka carruurta, daryeelka caafimaadka, dhaqanka iyo wakhtiga firaaqada. Waxaan sidoo kale mas'uul ka nahay arrimaha saameeya gurigaaga waxaana sidoo kale siinaa adeegyo ganacsi sidoo kale. Dhammaan macluumaadka waxa lagu helayaa af Iswiidhish.
Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan degmada, fadlan xor u noqo inaad la xiriirto xarunta macaamiisha ee Kungsbacka Direct - waxaan hubin doonnaa inaad hesho jawaab. Waxaan sida ugu fiican kuugu caawin karnaa Ingiriisiga.
Warbixin isku xire
Boga interneetka ee informationsverige.se External link. waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan Iswiidhen iyo Kungsbacka oo luqado kala duwan ku qoran una fiican qofka wadanka Iswiidhen ku cusub.
Xafiiska adeega macaamiisha ee Kungsbacka si toos ah
Stadshuset, kasoo horjeedka xarunta safarka
Storgatan 37 ee Kungsbacka
Telefoonka: 0300-83 40 00